Ny Tatitry Ny Mpisera: Fahatapahan’ny Aterineto Indray ao Iràka sy Kamerona · Global Voices teny Malagasy
Mpanoratra Netizen Report Team Nandika (es) i Cecilia Cárdenas, Antonia Cordignano, Arimalala
Voadika ny 27 Febroary 2017 2:51 GMT
Vakio amin'ny teny Español, русский, Nederlands, Français, English, English
Ao Kamerona, tahàka ny ao Iràka, efa lasa zatra ny fahatapahan'ny aterineto ny olona. Tamin'ny 17 Janoary, nametraka famerana ny fidirana (amin'ny aterineto) iry firenena voalohany, taorian'ny hetsi-panoherana nandritra ny volana maro hanoherana ny fanilikilihana ny Anglo-Saxons ao amin'io firenena any Afrika Andrefana io izay anjakan'ny mpiteny fantsay io. Nitarika fanagadrana olona maro be ireo hetsika ireo ary ny Kaomisera Ambonin'ny Firenena Mikambana momba ny Zon'Olombelona aza dia nilaza mihitsy fa nanao “fampiasan-kery tafahoatra” tamin'ireo Kameroney mpanao fihetsiketsehana ny polisy.
Mandritra izany fotoana izany any amin'ireo faritra ireo, nanahirana ny niditra tamin'ny aterineto nandritra ny telo herinandro mahery. Niteraka vokany ratsy tamin'ny varotra, ny orinasan'ny teknolojia ary tamin'ny fiainana andavanandro ilay fahatapahana. Araka ny fikambanana mpiaro ny aterineto, Internet Sans Frontière sy Access Now, fahaverezam-bola ho an'i Kamerona manodidina ny valo alina sy enina hetsy Euros no naterak'ilay dimy ambin'ny folo andro voalohany tsy nisy fifandraisana.
Tany Iraka, teo anelanelan'ny 1 sy 6 Febroary, nisy fahatapahana adiny iray in'efatra mitsitapitapy. Nifanindry tamin'ny fanadinan'ny famaranana taom-pianaran'ny sekoly ambaratonga voalohany izany. Ho an'ny fahatelo taona misesy, notapahan'ny manampahefana ny fifandraisana amin'ny aterineto mba tsy ahafahan'ny mpianatra manao hosoka mandritra ny fanadinana. Fohy ireo fahatapahana adin'ny iray tamin'ity taona ity raha ampitahaina amin'ireo tamin'ny volana may lasa teo, izay naharitra adin'ny telo tsirairay avy.
Nanaiky fanapahankevitra tsy nisy tatitra manameloka fepetra toy izany ny Filankevitry ny Firenena Mikambana momba ny Zon'olombelona tamin'ny Jona 2016, ary manizingizina fa ny “zon'ny olona ao amin'ny tontolo tena izy dia tsy maintsy arovana ihany koa an-tserasera indrindra indrindra ny fahalalahana maneho hevitra.”
Na tsy mihatra afa-tsy ara-teoria amin'ny mponina avy amin'ireo firenena fito any Afovoany Atsinanana sy Afrika Avaratra aza ilay didim-panjakana momba ny fifindràmonina navoakan'i Donald Trump. Miampanga ireo fakàna am-bavany momba ny finoany sy ny fitazonan'ireo mpitandro filaminana eny an-tsisinany ny findainy ireo mpivahiny avy amin'ny firenena hafa. Tamin'ny 04 Febroary, nisy vehivavy teratany Marokana mitondra ny zom-pirenena Kanadiana, manaraka ny finoana Silamo ary nanao hijab noraràna tsy hiditra amin'ny sisintany teo anelanelan'i Etazonia sy Kanada taorian'ny fisavan'ny mpiasa ka nahitàna vavaka tamin'ny teny Arabo tao anatin'ny findainy. Izao no nolazaina azy : “Tsy mahazo miditra any Etazonia ianao satria nahitanay lahatsary maneho fandrahonana ho anay.”
Ao anatin'ireo dingana fiarovana ny fandriampahalemana, milaza ny sekretera vaovao misahana ny fiarovana anatiny, John Kelly, fa afaka mangataka amin'ireo mpivahiny avy amin'ireo firenena ireo ny tenimiafin'ny boaty imailaka sy ny tambajotra sosialin'izy ireo ny mpanara-maso ny sisintany. Tamin'ny resadresaka tao amin'ny National Public Radio, nanambara i Kelly fa mety hiitatra amin'ny mpivahiny avy any amin'ny firenena hafa ity fepetra ity.
Ankehitriny, araka ny fanambaràna iray navoakan'ny Filohan'ny holafitry ny mpisolovava any Tlemcen (Alzeria), hiharan'ny sazy toy ny fampiatoana ny vatsim-pianarana sy ny saram-pianarana ary “sazy” hafa ireo mpisolo vava mampiasa ny tambajotra sosialy [fr]. Fanapahankevitra noraisina taorian'ny fanakianan'ny filohan'ny holafitry ny mpisolovavan'i Alzeria, Abdelmajid Sellini, momba ny fampiasan'ny mpisolovava ao an-tanàna “be loatra” ny Facebook. Nasongadin'i Sellini ihany koa ny fikasany handray ny fepetra “ilaina” ho an'ireo mpisolovava izay mety hanimba ny asa amin'ny alalan'ny tambajotra sosialy.
Nanagadra ireo mpampiasa aterineto izay nanevateva manampahefana amin'ny fampiharana ny lalàna tamin'ny amin'ny tambajotra sosialy ny mpitandro filaminana Shinoa. Araka ny Radio Free Asia, olona enina raha kely indrindra no voasambotra ary fara fahakeliny, iray no nampangaina ho nandika ny lalàna momba ny filaminam-bahoaka noho ny famoahana tao amin'ny Weibo tsikera momba ny polisy iray maty am-perin'asa. Ny lalàna, izay manan-kery hatramin'ny 2006, dia manasokajy ireo fandikàndalàna afaka anasazian'ny mpitandro filaminana na tsy misy fanarahamaso araka ny lalàna aza.
Olom-pirenena Okrainiana roa no voaheloka higadra dimy taona an-tranomaizina noho ny “fanohanana ny fampisaraham-bazana” tamin'ny alalan'ny famoahana (lahatsoratra) tao amin'ny Vkontakte. Tamin'ny herinandro lasa, ireo lehilahy notanana am-ponja nanomboka tamin'ny Aprily 2015, dia voaheloka ho mpikarakara ireo vondrona mpisintaka tamin'ny Febroary 2014, fotoana fohy taorian'ny Revolisiona Euromaidán. Manatevina ny lisitry ny tranganà fampiasana tambajotra sosialy notsaraina noho ny fanohanana virtoaly ny fampisaraham-bazana izy ireo.
Nampangain'ny Tribonalin'ny fiarovana ao Emira Arabo Mitambatra ho naniratsira ny Fanjakana tamin'ny Facebook ilay Jordaniana mpanao gazety, Tayseer al-Najjar, efa nogadraina nandritra ny fotoana vitsivitsy. Toa hoe namoaka tsikera tao amin'ny Facebook momba ny toeran'ny Emira Arabo Mitambatra tao anatin'ny ady tao Gaza (Isiraely) tamin'ny 2014 fony izy nipetraka tany Jordana. Mitantara ny mpanoratra ao amin'ny Global Voices, Afef Abrougui, fa “ny mampanahy amin'ny raharahan'i Najjar dia tsy noho izy nenjehina noho ny fanehoany ny heviny, zavatra efa mahazatra ao amin'ilay faritany, fa noho ny fanambarana izay nataony talohan'ny nifindrany ho ao amin'ilay firenena. ” Nogadraina tamin'ny Desambra 2015 izy, natao mangingiana nandritra ny dimy volana, ary avy eo dia mbola voatazona vonjimaika nandritra ny herintaona mahery.
Ao India, nikarakara fanentanana mba hitaizàna ny fahatsiarovan-tenan'ny tsirairay momba ny olan'ny fiainana manokana amin'ny aterineto ireo vondrona mpanohana ny rindrankajy malalaka sy misokatra ary nanambara ny volana Janoary ho toy ny volan'ny fiainana manokana, tamin'ny alalan'ny famoronana tenifototra #PrivacyAware (fahatsiarovan-tena momba ny fiainana manokana) tao amin'ny Twitter mba hanasàna ireo mpampiasa handray anjara amin'ilay fanentanana. Mbola ezaka goavana izany noho ny tsy fahampian'ny votoaty amin'ny teny Hindi, Bengali ary Tamil ho an'ny Indiana izay tena marefo eo anatrehan'ny fandrahonan'ny tsy filaminana an-tserasera
Namorona fampiharana amin'ny finday ho an'ny iOS sy Android izay manome fahafahana ny mpampiasa hanaraka ireo tranonkala nosakanana, handrefy ny fahafahan'ny tambajotra ary hamoaka ny vaovao voaangon'ny mpampiasa mba hanavao hatrany io angondrakitra misokatra ity ny Open Observatory of Network Interference (OONI)
Samy nandray anjara tamin'ity tatitra ity i Afef Abrougui, Ellery Roberts Biddle, Oiwan Lam, Weiping Li, Leila Nachawati Rego sy Sarah Myers West.